QIIMAYN: Saxeexyadii Ugu Wanaagsanaa Ee Kooxaha Waaweyn Sameeyeen Tan Iyo 2010 Oo La Qiimeeyey - Gool24.Net
QIIMAYN: Saxeexyadii Ugu Wanaagsanaa Ee Kooxaha Waaweyn Sameeyeen Tan Iyo 2010 Oo La Qiimeeyey
Suuqa iibka ciyaartoyga xagaagan ayaa si buuxda u furan, waxaana naadiyada waaweyn ay koox walba intii tamarteeda ah kaga adeeganaysaa jeebaddeeda uu dhaawaca gaadhsiiyey Fayraska Korona ee muddada afarta bilood ah aanay wax dakhli ahi soo gelin.
Barcelona ayaa mar horeba tallaabadii ugu horreysay qaadday, waxaanay Juventus kasoo iibsatay ruug-caddaaga khadka dhexe ee Miralem Pjanic iyadoo dhinaca kalena uu tegay Arthur Melo oo Turin ka degaya marka uu dhamaado tartanka Champions League.
Borussia Dortmund ayaa iyaduna gacanta ku dhigtay difaacii PSG ee Thomas Meunier oo ay kooxo badan raadinayeen, halka Tottenham ay gacanta qabsatay Pierre-Emile Hojbjerg oo ay Southamtpon kala soo wareegeen. Chelsea ayaa ah tan ciyaaryahannada ugu waaweyn gacanta kusoo dhigtay, waxaanay soo xerogelisay Timo Werner iyo Hakim Ziyech, halka Liverpool ay keensatay beddelkii Andy Robertson.
Saxeexyada ugu waaweyn ee illaa hadda dhacay ayay kuwan sare ku xusan ka mid yihiin, laakiin waxa kale oo jira naadiyo kale oo lasoo wareegay ciyaartooyo aan sida kuwan magac weyn u lahayn.
Kooxaha waaweyn ee Yurub ayaa mar walba ah kuwa laga qiyaas qaato qaabka uu noqonayo suuqa iibku, balse doorkan waxa dabar iyo xakame aan la dhaafin karin ku noqday saamaynta uu qasnadaha kooxaha waaweyn ku yeeshay Fayraska Korona.
Manchester City ayaa si wanaagsan u adeeganaysa labadii saxeex ee ugu horreeyey oo ahaa Ferran Torres iyo Nathan Ake mar horeba shaacisay, halka Koulibaly iyo xiddigo kalena ay ku raad joogto.
Marka uu tartanka Champions League soo dhamaado ayaa la filayaa in kooxuhu ay dagaalka ugu adag u galaan sidii ay isku xoojin lahaayeen, laakiin inta aan waqtigaas la gaadhin, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saxeexyadii ugu waaweynaa ee ay kooxaha waaweyn ee Yurub sameeyeen tobankii sannadood ee ugu dambeeyey.
Qiimayn lagu sameeyey ciyaartoyda la kala iibsaday ee ugu waxqabadka badnaa amaba lagu tilmaamay saxeexyada guuleystay, waxay soo xidheen diiwaanka tobankii sannadood ee kasoo bilaabmay 2010 kuna dhamaanaya 2020.
Wixii halkaas ka dambeeya, waxa bilaabmi doona toban sannadood oo dambe oo iyagana si gaar ah xogtooda loo ururin doono, marka ay dhamaadaanna lala wadaagi doono dadka xiiseeya ciyaaraha.
Haddaba, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qiimayn lagu sameeyey saxeexyadii ugu wanaagsanaa ee tobankii sannadood ee ugu dambeeyey oo kasoo bilaabmay xagaagii 2010:
Arsenal: Pierre-Emerick Aubameyang, Weeraryahan
Qiimahihii lagu iibsaday: £57m, 2018
Saxeexii kale ee soo raacay: Laurent Koscielny
Atletico Madrid: Diego Godin, Difaac
Qiimahihii lagu iibsaday: £7m, 2010
Saxeexii kale ee soo raacay: Filipe Luis
Bayern Munich: Robert Lewandowski, Weeraryahan
Qiimahihii lagu iibsaday: Free, 2014
Saxeexii kale ee soo raacay: Joshua Kimmich
Barcelona: Neymar, Afka hore
Qiimahihii lagu iibsaday: £71.4m, 2013
Saxeexii kale ee soo raacay: Jordi Alba
Borussia Dortmund: Shinji Kagawa, Khadka dhexe
Qiimahihii lagu iibsaday: £280,000, 2012
Saxeexii kale ee soo raacay: Robert Lewandowski
Chelsea: Eden Hazard, Garabka weerarka
Qiimahihii lagu iibsaday: £31.5m, 2012
Saxeexii kale ee soo raacay: Cesar Azpilicueta
Inter Milan: Samir Handanovic, Goolhaye
Qiimahihii lagu iibsaday: £13.5m, 2012
Saxeexii kale ee soo raacay: Marcelo Brozovic
Juventus: Andrea Barzagli, Difaac
Qiimahihii lagu iibsaday: £270,000, 2011
Saxeexii kale ee soo raacay: Andrea Pirlo
Liverpool: Virgil van Dijk, Difaac
Qiimahihii lagu iibsaday: £76m, 2018
Saxeexii kale ee soo raacay: Andy Robertson
Manchester City: David Silva, Khadka dhexe
Qiimahihii lagu iibsaday: £26m, 2010
Saxeexii kale ee soo raacay: Sergio Aguero
Manchester United: David De Gea, Goolhaye
Qiimahihii lagu iibsaday: £18.9m, 2011
Paris Saint-Germain: Zlatan Ibrahimovic, Weeraryahan
Qiimahihii lagu iibsaday: £19m, 2012
Saxeexii kale ee soo raacay: Marco Verratti
Real Madrid: Toni Kroos, Khadka dhexe
Qiimahihii lagu iibsaday: £22.5m, 2014
Saxeexii kale ee soo raacay: Luka Modric
Tottenham Hotspur: Christian Eriksen, Khadka dhexe
Qiimahihii lagu iibsaday: £11.5m, 2013
Saxeexii kale ee soo raacay: Hugo Lloris